Home Wararka Ciidamada XDS oo lagu amray in ay ka guuraan agagaarka goobta ay...
Ciidamada XDS oo lagu amray in ay ka guuraan agagaarka goobta ay ka dhaceyso doorashada Madaxweynaha
Guddoonka Baarlamanka Soomaaliya ayaa soo saaray go,aamo la xariira sugida Amniga goobta lagu waddo in ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya 15 bishaan.
Qodobada kasoo baxay guddoonka ayaa sidaan u qornaa:
Ciidanka Xoogga Dalka qaybta degan Teendhada Afasiyooni waxay si ku meelgaar ah u banaynaynan Xaruunta teendhada inta Doorashada lagu guda jiro, waxayna xoojinayanan Amaanka
Cidanka Nabadsugidda waa in ay si gaar ah ula socdaan xubnaha ka tirsan Alshabaab ee gudaha
Magaalada ku dhuumaaleysanaya oo ay fashiliyaan intaanay wax sameyn.
Maalinta Doorashada Madaxweynaha lama ogola in lala soo galo Teendhada Telephone ama Tablet. Ka soo qaybgalayaasha waxaan kula talinaynaa in ay Telephoonadooda uga soo tagnan banaanka oo ay darwaladoodu u dhiibtaan.
Previous article[Deg Deg] Jadwalka Hadal Jeedinta Musharaxiinta oo la soo saaray
Next article“COVID-19” Masiibadii Xasan Kheyre ka Macaashay!
Boobka Maaliyadeed iyo Been-Boodka Xeer ilaaliyaha.
Villa Somalia “Madaxweynaha waxba kama ogeyn qoraalka laga soo minguuriyay Madaxtooyada...